Izixhobo ezimbalwa zefotoshop simahla | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Izixhobo ezimbalwa zefotoshop simahla
UJose Angel | | Iipateni, Iibrashi, Izibonelelo, Ukuhlelwa
I-Photoshop sesinye sezixhobo zesoftware ezinamandla malunga nokuhlela kunye nokukhohlisa ukufota. Kungenxa yoko le nto kukho iintlobo ngeentlobo zezixhobo esinokuthi sizitsale. Kodwa ngenxa yoku kufuneka uzifumane kuqala.
I-Creativos inika amawaka ezi zixhobo ngeziqendu zayo, zisisondeza kwizigidi zeendawo ezikuGoogle kodwa hayi ukuba azinabhengezo bukhulu kwintengiso. Namhlanje siza kubeka ubuninzi bezixhobo oza kuzilinga.
Ukuphonononga zonke iisayithi, nganye yezi zibonelelo zangoku kude kube ngumhla wokupapashwa kwazo. Siyaqonda ukuba ukugcina iwebhusayithi kuyabiza kwaye ukuba nangaliphi na ixesha undwendwela le posi kwaye azifumaneki, kunokuba zizizathu ezahlukeneyo. Omnye wabo ukuwa kweekhonkco kwiiwebhusayithi zokugcina.
Ke ukuba awuzokwazi ukuyikhuphela, sicebisa ukuba uqhubeke nokujonga amanye amaphepha, kodwa ngethemba lokuba iyakuhlala ixesha elide.
1 Masiqale ngebrashi
2 Landela iphethini
Isixhobo esingxamisekileyo somyili iqala kwasekuqaleni iibhrashi. Kungenxa yoko le nto ezi webhusayithi ziza kukusebenzela iiprojekthi zakho ezahlukeneyo.
Iibrashi ezingama-25 ezinikwe igama iteksi
Iseti yeebrashi ezingama-21 Kuyo
Iipateni eziyilelwe kwangaphambili zokwenza umsebenzi wakho ngendlela engamanzi nangaphezulu. Nayi imizekelo eliqela yokuba zeziphi iipateni.
Uhlobo lwepateni iphepha laseJapan
Sonke siyazithanda iintyatyambo, nazi ezinye Iipateni zeentyatyambo ukuhombisa uyilo lwakho.
Umxholo onika imvakalelo yokuba ngaphakathi ebusikaluhlaza, iipateni
Iimodeli ngaphandle kombala, kwi mnyama nokumhlophe
Kwaye ukugqiba: Iipateni ezingama-498 eqokelelwe kwesi sithuba. Njengecandelwana, ukuba ndiza kuthi apha aziphononongi zonke, ngenxa yokungenzeki kwexesha. Ewe kunjalo, ezinye ziyasebenza ngokwenene.
Ngokuqinisekileyo uninzi lwezi ubulwazi kodwa abanye ngokuqinisekileyo abazazi, ukuba bayakhonza wabelana nabo ukuze wonke umntu axhamle kwezi zibonelelo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » Izibonelelo » Izixhobo ezimbalwa zefotoshop simahla
UAditya Aryanto okanye indlela eyenzeka ngayo i-minecraft
Fumana ii-Adobe Add-ons: iThala leeNcwadi